जोहेब मानन्धरको सांगीतिक यात्रा - पुरुष कर्नर - नारी
गीत गाउन कहिले सुरु गर्नुभयो ?
बाल्यकालदेखि नै कविता कोर्न तथा बाचन गर्न मन लाग्थ्यो । रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रममा जान्थेँ । ५० को दशकमा मेरो एल्बम ‘ट्यालेन्ट’ रिलिज भयो र त्यसैले मलाई स्थापित गरायो ।
तपाईंको गीतको विशेषता के छ ?
मेरो गीतको शब्दमा मौलिकता हुन्छ । हरेक गीत फरक–फरक स्वादमा छन् । गीत विषयमा प्रवेश गरी बगेको हुन्छ ।
आफूले गाएका गीतको भिडियो तयार पार्न व्यस्त छु ।
नेपाली संगीत क्षेत्रमा आफ्नो छवी कस्तो छ जस्तो लाग्छ ?
म पृथक् तथा स्टाइलिस गायकको रूपमा चिनिएको छु ।
सांगीतिक क्षेत्रलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
म निरन्तर संगीत क्षेत्रमा लागिरहेको छु । २०५७ सालमा पहिलो इमेज अवार्ड हात पारेँ । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बोलको गीत चर्चित बन्यो । सफलता साधानाबाट प्राप्त हुन्छ । संगीतलाई रहर पूरा गर्ने माध्यम मात्र बनाउनुहुदैन । संगीतमा साधनाको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
जेष्ठ ११, २०७३ - वान यूथको सफल यात्रा
जेष्ठ ५, २०७३ - शिवसागरको सफल सांगीतिक यात्रा